HomeWararka CiyaarahaLeicester City oo kula Dagaalami Doonta Chelsea saxiixa Gleison Breme
May 8, 2022 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga 0
Leicester City ayaa u dhaqaaqday inay kula dagaalanto Chelsea saxiixa daafaca dhexe ee Torino ee Gleison Bremer, sida lagu sheegay warbixin.
Laacibka reer Brazil ayaa lala xiriirinayay inuu u wareegayo kooxo badan oo Yurub ah suuqa xagaaga soo socda, ka dib olole cajiib ah oo uu kooxda Turin ka sameeyay Serie A.
Bremer waxa uu ciyaaray 33 ka mid ah 36-kii kulan ee horyaalka ee Torino intii lagu jiray ololihii 2021-22 ilaa hadda, halkaas oo ay kooxdiisu ku faanto rikoodhka difaaca ee shanaad ee ugu fiican, kaas oo ka caawiyay in ay galaan kaalinta 10-aad wakhtiga qorista.
Foxes Brendan Rodgers ayaa sare u qaaday xiisaha ay u qabaan saxiixa daafacan xagaagan sida laga soo xigtay The Sun, iyadoo ciyaaryahanka khadka dhexe Dennis Praet lagu soo dari doono heshiis kasta oo suurtagal ah oo 40 milyan ginni lagu qiimeeyo Bremer.
Laacibka reer Belguim ayaa 21 kulan oo Serie A ah amaah ugu ciyaaray Torino ilaa haatan xilli ciyaareedkan, iyadoo kooxda ay xiisaynayso inay si joogto ah ula soo wareegto 27 jirkan, Leicester ayaa doonaysa inay u isticmaasho miisaan si ay uga sii hormarto Chelsea.
tartanka Bremer, iyadoo kooxda heysata Champions League sidoo kale la sheegay inay xiiseyneyso.
Sida warbixinta lagu sheegay, madaxda Leicester waxay la kulmeen madaxda Torino markii ay ku sugnaayeen Talyaaniga kulankoodii semi-finalka Europa League ee Roma Khamiista, iyagoo rajo ka qabay inay ku heshiiyaan heshiis laba jibaaran.
Hadii Bremer uu u dhaqaaqo kooxda East Midlands ololaha 2022-23, waxa uu la tartami doona Caglar Soyuncu, Jonny Evans iyo Wesley Fofana si ay ugu soo bilowdaan safka Rodgers, iyadoo labada dambe ay soo gaareen dhaawac. -xilli ku dhuftay sanadkan.